Isisetshenziswa landscape izithombe
kwelanga emangalisa. Izintaba eziphakeme. Rushing emifuleni. Nature anganika nezithombe ingenye amathuluzi engcono ukuthi wasebenzisa ukudlulisela ubuhle bezwe. Landscape izithombe kungaba indlela ukubona izwe lonke yonke inkazimulo yayo nokubonisa izwe omunye.
Definition of landscape photography - imvelo izithombe noma landscape. Kakhulu akuvamile, in the ifremu landscape izithombe osolwa. I okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho lapho kubalulekile ukubonisa isikali into kokuba izithombe - okukhulu noma okuncane kakhulu.
Nge imishini efanele namakhono uzokwazi ukwenza oluvelele landscape izithombe.
Asikho isidingo ukuchitha amathani imali yokuthenga ikhamera professional esetshenziswa ukuthatha izithombe ezinhle. Ungasebenzisa avamile digital ikhamera entry level futhi bathola imiphumela emihle.
Into yokuqala udinga ukuthenga lens ebanzi-engela of 35mm. Buhle amakhamera samanje sedijithali oyise - kungenzeka ukubona isithombe esikrinini, kanjalo lula umsebenzi obuqalene photographer.
Yini ikhamera uthatha izithombe kuncike ngokuyinhloko photographer futhi isabelomali sakhe. Lapho ekhetha ikhamera kuyadingeka ukuba acabangele ukuthi ngisho digital eziphambili kakhulu amateur - insipho izitsha ungavumeli ukucushwa kwe ongakhetha esithinta isithombe naphumayo. Ungakhetha kuphela imodi othomathikhi, osuvele oyi-zahlelwa izilungiselelo ukuchayeka.
Digital SLR ikhamera - nokusebenzisa isibuko kuphrojekthi isithombe kusukela lens matrix. Inzuzo ebaluleke kakhulu kulezi amakhamera yikhono ukushintsha lens kuye ngenhloso sokudubula. Estesstvenno intengo amakhamera okunjalo kuyoba kunalelo digital ezishibhile - insipho izitsha, plus isidingo ukuthenga lens ukubaniza nezinye izesekeli uhlobo yakho yezithombe.
Uma photographer landscape ukukhetha ikhamera yedijithali kanye nesethi lens kunesidingo. (Zoom lens 18-105 / 18-135 kwamaphutha noma 18mm, 24mm, 35mm). Ngakusasa ithuluzi ebaluleke kakhulu ukuthola isibhamu abahle, kudingeka sibe tripod. Ikhamera tripod iqinile umile, ngaleyo ndlela sigweme lo ukufiphala kuletitfombe ekukhanyeni ongaphakeme noma uma usebenzisa kancane ijubane yokucina.
Ukulungiswa we tripods kukhona inombolo enkulu, ngakho Angicabangi ukuthi othile ube nobunzima nale. Lapho ekhetha tripod, uholwe imithetho eyisisekelo, tripod kufanele kube ngokwanele futhi esindayo, yini obungayenza ukusekela isisindo ikhamera yedijithali kanye lens, futhi kufanele kube lula njengoba uzodinga ke isikhathi eside ukuba ngisithwale.
izihlungi Khanyisa - eyenziwe impahla esobala kungandisa noma ukuthuthukisa Umbala omnyama nomhlophe. Ungasebenzisa nezihlungi esetshenziswa ukuze zenze isibhakabhaka sibe bluer futhi te ngaphezulu kwelanga. Ngosuku esinamafu, ungakwazi ukwengeza umbala izithombe noma ulungise Ngokuphambene ompungana phezu kwezwe.
Hhayi buzo babe hlobo of ikhamera unquma ukuthenga, qiniseka ukuthi uzokwazi ukuba afeze konke imishini yakho ibanga elide ngenxa yokuthi ngokuvamile kufanele zululeka nazo zonke izimpahla zazo, ukuthi asetshenziswa ukuthola indawo ephelele isithombe.
Kwamanzi ngezandla zabo ngesikhathi cottage ehlobo kwenziwe ngokushesha!
Namatsisela ngoba Penoplex: izici kanye ukusetshenziswa
Ukudla kolwelwesi ne-asidi eningi